यो सामाग्री बिना अब कुनै पनि काम पूरा गर्न सक्दैन। को प्राइमर विभिन्न सामाग्री को आसंजन सुधार गर्न अभिप्रेरित एक तरल संरचना छ। यो पकड एक टास्ने भनिन्छ।
आसंजन - दृढ सँगै विभिन्न सामाग्री को क्षमता। हामी सेक्स प्राइमर कुरा भने, यस्तो संरचना, जग संग पकड सम्बन्ध सुधार टाइल्स, आदि को बिछाउने बलियो को प्राइमर पनि परिणामस्वरूप screed जसबाट खुर को जोखिम कम, अधिक समान रूप dries सब्सट्रेट मा चिस्यान को अवशोषण रोक्छ।
र सबै प्राइमर गन्तव्य हो। यो सतह बलियो पानी वाष्प permeability बढ्छ। यो सामाग्री अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य - निर्माण धूलो को सतह रही। तल्ला प्राइमर फरक सतहहरु लागि आवश्यक छ। जो संरचना दिइएको सतह लागि उपयुक्त छ, हामी यस लेखमा वर्णन।
प्राइमर आवश्यक? छ कि छैन
सबै मान्छे टाढा निर्माण कार्य हटाइएको छैन, यो प्राइमर तल, उदाहरणका लागि, आवश्यक छ के, आदि, टाइल बिछाउने एक प्रवाह कोटिंग सिर्जना गर्नु अघि स्पष्ट छ यो अन्तिम कोट पूर्ण छ कि सबै कमीकमजोरी आधार लुकाउँछ, र सम्पूर्ण बोझ अन्ततः उहाँलाई पतन जस्तो थियो।
यो सत्य हो, तर केवल आंशिक। यो कुरा topcoat गुणस्तर उहाँको पकड, सब्सट्रेट गर्न आसंजन को गुणवत्ता को बल निर्भर छ। यो पर्याप्त छैन जब, screed, आत्म-leveling तल, टाइल टाँसन र अन्य कोटिंग्स अन्ततः पछि पर्नु र विकृत गर्न संभावना छ गर्नेछ। यो के थिएन, र यो तल्ला प्राइमर लाग्छ। हामीलाई सामाग्री द्वारा प्रदर्शन गर्दै छन् अन्य के कार्यहरु विचार गरौं।
संरचना बलियो बनाउँछ
उदाहरणका लागि, screed प्राइमर एक ठोस homogeneous संरचना सिर्जना गर्ने, सबै अवस्थित cavities भर्न आवश्यक छ अघि subfloor, छाडा porous, स्तरित छ भने। यो धेरै सेन्टिमिटर गहिराइमा गर्न आधार बलियो बनाउन डिजाइन गर्दै छन् प्राइमरों एक गहिरो प्रवेश उत्पादन।
निर्माण धूलो मुक्त
यो निर्माण कार्य समयमा धूलो को एक ठूलो रकम उत्पादित कुनै गोप्य छ। को सतहहरु बीच सिर्जना यसको ठीक कणहरु आफ्नो आसंजन रोकन, तह बंधुआ गर्न। तल्ला प्राइमर तिनीहरूलाई बांध।
permeability आधारमा घट्छ
अर्को शब्दमा, आधार चिस्यान अवशोषित छैन। यो, बारी मा, खपत leveling मोर्टार, रंग, गोंद कम गर्छ।
यो फफूंदी को उपस्थिति विरुद्ध सुरक्षा
arbors, गर्मी भान्सा, terraces, बालकनी आदि - यो उच्च आर्द्रता वा unheated भवनहरु संग वातावरणमा उच्च गुणस्तरीय तल्ला कवर सिर्जना महत्त्वपूर्ण छ यस्तो प्राइमरों fungicides र additives vlagoottalkivayuschey सुरक्षा गुण दिनकै।
यो सबै मुख्य तरल वा टास्ने कोटिंग्स, रूपमा साथै चित्रकला को लागि आधार को तयारी लागू हुन्छ। यी अवस्थामा यो सामाग्री को राम्रो आसंजन सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। स्वाभाविक प्रश्न उठ्न सक्छ: "तल्ला लिनोलियम, laminate वा काठ को फर्श बिछाउने अघि प्राइमर आवश्यक गर्छ?"
कोटिंग यसलाई पूर्ण गोंद अवशोषित हुन्छ भनेर, सतह लीन योजना छ जब मामला मा primed को लिनोलियम आधार laminate अन्तर्गत। सतह बलियो बनाउन र यांत्रिक कार्य गरेर आफ्नो विनाश रोक्न - यो ट्रेल मा सिमेन्ट screed लिनोलियम घटनाको गरेको हुनुपर्छ।
काठ तल्ला (प्लाईवुड, कण बोर्ड) को लागि प्राइमर पनि आवश्यक छ। यो विशेष गरी अक्सर लिनोलियम प्रयोग गरिन्छ नम कोठा, मा, घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने गुण अधिकार हुनुपर्छ। को laminate तल्ला प्राइमर बिछाउने आवश्यक छ छैन पहिले, तर यो आधार leveling अघि आवश्यक छ। यसको स्थायित्व र कोटिंग को गुणवत्ता - यो कडा leveling कसरी ठोस मिश्रण जडान, र अन्तमा निर्धारण गर्छ।
प्राइमरों को प्रकार
प्रभाव को संयन्त्र यी सामाग्री सतह कोटिंग र गहिरो प्रवेश लागि रचनाहरूको भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। उत्तरार्द्ध मा, तपाईं पहिले नै आधारभूत विचार - तिनीहरूले आधार बढी ठोस friable सतह बनाउन, यो बलियो बनाउँछ। सतह प्राइमरों आधार को राम्रो आसंजन विशेषताहरु दिन डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ।
यी यौगिकों अधिकांश मा सब्सट्रेट को खुरदरापन दिने, धेरै राम्रो बालुवा समावेश छन्: यो सामान्य क्लच लागि आवश्यक छ। प्राइमर संरचना को वर्गीकरण विचार गर्नुहोस्।
ठोस तल, काठ सतहहरु - यो सबै भन्दा साधारण, सार्वभौमिक प्राइमर छ। भौतिक, लागू गर्न धेरै सजिलो छ चाँडै dries कुनै अप्रिय पन्जेन्ट गन्ध, पानी संग dilution अनुमति दिएको छ। यो भवन मर्मत गर्न प्रयोग गरिएको छ। यो टाइल्स, plasterboard अन्तर्गत फर्श लागि प्राइमर छ। सबैभन्दा यी लोकप्रिय को मिश्रण Ceresit निर्माताहरु 'एल्फ », ओलम्पिक योगों छन्।
प्राइमरों काठ र धातु सतहहरु लागि डिजाइन। त्यहाँ यस्तो यौगिकों धेरै किसिमहरु हो:
जस्ता फस्फेट - alkyd पेंट्स आवेदन गर्नु अघि सतहहरु लागि सबै भन्दा राम्रो anticorrosive प्राइमर कोटिंग, विशेषज्ञहरु अनुसार, उत्कृष्ट छ र।
जस्ता chromate समान गुण भएको, तर यसलाई आवेदन विस्तारित सीमा छ। यस श्रेणीका उत्कृष्ट प्राइमर Lazur, «Polyfarb», Belinka द्वारा निर्मित छ।
ठोस फर्श को तल्ला screed र प्रशोधनका लागि यो प्राइमर, तपाईं चिस्यान देखि सुरक्षा आवश्यक विशेष गरी जब। को रचनाहरूको सल्वैंट्स संग पतला हुन सक्छ, तिनीहरूले एक उच्च रासायनिक प्रतिरोध छ।
काठ लागि प्रयोग योगों। विषाक्त यस प्रकारको को प्राइमर, त्यसैले यसलाई आवश्यक छ कडाई सुरक्षा र राम्रो-प्रसारित निर्देशनहरू पालन गर्न।
यो विशेष संरचना ताजा softwood देखि उत्पादन तल्ला को पूरण लागि निमित्त जो। उहाँले रेजिन सतह कार्य गर्न अनुमति छैन।
सानो श्रृंखला मा उत्पादित गर्दै छन् कि विश्वसनीय यौगिकों - यूरो प्राइमर बहु, FORBO 044, Uzin पीई 260. को तल्ला screeds लागि प्राइमर उपखाडी मास्टिक डामर, पत्थर र माटो को पात्र, खनिज प्लेट, कोलतार, आदि संग गर्भवती
माथिको देखि यो प्राइमर सामाग्री को विशेषताहरु जो यो लागू गरिन्छ गर्न अनुसार चयन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। सञ्चालन अवस्था र सतह को राज्य - तर यो खाता धेरै कारक मा लिनुपर्छ।
ठोस फर्श लागि प्राइमरों
अखंड ठोस गरिबी पानी अवशोषित। यो यसको सतह मा एक शानदार फिलिम द्वारा प्रमाणित छ। यसलाई कुनै पनि समाधान राख्न निषेध गरिएको छ। यस कारण, यो sanded हुनुपर्छ, वा (प्राथमिकताको) एक प्राइमर कोट, weakly अवशोषित सतहहरु को लागि अभिप्रेरित। तिनीहरूले सामान्यतया Milky रंग छ।
कहिलेकाहीं उनको संरचना "Betonokontakt" प्रतिस्थापन रोकन सल्लाह दिछन लागि finishers। यो गुलाबी रंग द्वारा विशेषता छ। यो धेरै लोकप्रिय प्राइमर छ। तल्ला भर्नु द्वारा एक पनरोक फिलिम धेरै तरल संरचना फरक जो थोक फर्श सिर्जना गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ waterproofing आधार प्रदान गर्दछ, जो फारम रूपमा पनि सफलता संग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्लास्टिक केबल सम्बन्धहरु लागि प्राइमर
लागि epoxy आत्म-leveling फर्श polyurethane वा epoxy प्राइमरों प्रयोग गरेर। जब फर्श को निर्माताहरु को सिफारिसहरू द्वारा निर्देशित हुन खरीद। प्रवाह कोटिंग लागि भाग प्राप्त, एक माटो तल्ला screed मा निर्माताको सिफारिसहरू जाँच गर्नुहोस्। यो बहुलक फर्श लागि विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
सिमेन्ट-बलौटे आधार लागि
यस्तो आधारमा साथै screed सिमेन्ट रचनाहरूको आधारित गहिरो प्रवेश primed। तिनीहरूले वस्तुतः बेरंग र अलिकति turbid छन्। कमजोर आधारमा र यस्तो सामाग्री संग लेपित पुरानो सम्बन्ध।
खपरैल लागि योगों
म यसलाई टाइल्स बिछाउने अघि तल्ला प्राइमर चाहिन्छ? विशेषज्ञहरु सकारात्मक यो प्रश्नको जवाफ। यस मामला मा Alkyd प्राइमर, एक सार्वभौमिक संरचना छ। यसलाई ठोस, काठ र अन्य आधार मा आवेदन लागि प्रयोग गरिन्छ। यस मामला मा, तपाईं यौगिकों दुई प्रकार को एक लागू गर्न सक्नुहुन्छ:
Perchlorovinyl - चिस्यान विकर्षक गुण भएको एक फिलिम सुखाने मा सिर्जना। को संरचना ठोस भित्र मोल्ड, च्याउ गुणन रोक्छ।
Glyptal - सामान्य उद्देश्य प्राइमर उत्कृष्ट anticorrosive गुण छ। यो राम्रो र एकदम पालना आधार को बल बढ्छ।
सामान्यतया priming तल्ला सजिलै त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। तेर्सो सतह धेरै सजिलो ह्यान्डल। तर, तिनीहरूले तपाईंलाई सुरू अघि तयार गर्न आवश्यक:
माटो र मलबे को नि: शुल्क;
यदि आवश्यक, पोलिस;
तेल दाग (कुनै छ भने) एक विलायक संग degrease;
यस्तो प्रिपेरेटरी काम भइरहेको, तुरुन्तै प्राइमर अघि समाप्त तल्ला समाप्त चयन तस्वीर गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। यो सामान्यतया दुई वा तीन चरणमा गरेको छ। तिनीहरूको संख्या आधार अवशोषण को हदसम्म निर्भर गर्दछ। प्राइमर को पहिलो पत्र कोटिंग मा यो pores र microcracks भरिन्छ कि पतला।
दोस्रो र तेस्रो तहहरू मात्र अघिल्लो पूरा सुकाएपछि लागू छन्। सामान्यतया, यो प्याकेजिङ्ग निर्माता सुकाउने समय संकेत गर्छ। पनि भने, आफ्नो राय, एक पूर्ण ड्राई सतह छ, कम यो असम्भव छ। तर, यो सतह मा बसे धूलो रोक्न कोट बीच विश्रामहरू पनि सुत्छन् छैन आवश्यक छ। तल्ला लामो वा समतल ब्रश ह्यान्डल गर्न सुविधाजनक रोलर यसमा प्राइमर लागू हुन्छ।
तला प्राइमर: मूल्य
सायद तपाईं आफ्नो मा काम सम्हाल्न सक्नुहुन्छ, तर निम्नानुसार यदि तपाईं व्यवसायीक देखि मदत माग्न, तिनीहरूले आफ्नो सेवा कदर हुनेछ। मास्को मा, सेवा मूल्य सीमा को लागि, प्रति वर्ग मीटर 15 500 rubles को subfloor अवस्था र प्रयोग निरूपण आधारमा हो। औसत मूल्य - प्रति वर्ग मीटर 65 rubles भित्र।
जो तपाईं आफ्नो घर को लागि फर्श चयन, तपाईं पक्कै पनि यसलाई धेरै वर्ष को लागि सौन्दर्य र स्थायित्व लागि खुशी दिन चाहन्छु। परिणाम यस्तो मात्र संरचना को विकल्प र आधार priming गर्न, प्रिपेरेटरी काम गर्न जिम्मेवार मनोवृत्ति संग हासिल गर्न सकिन्छ विशेष।
पलिश ठोस: लाभ र सामान्य विशेषताहरु
कम्पनी को विकल्प मा खण्डका छत र सिफारिसहरू सबै आकर्षण
तरल वालपेपर सुझाव मालिकको अन्तर्गत पर्खालहरु को तयारी
सबै भन्दा राम्रो निर्माताहरु देखि बेडरूम लागि गैर-बुना वालपेपर
सबै भन्दा राम्रो वालपेपर के हो: Vinyl वा गैर-बुना - विकल्प स्पष्ट छैन
गर्मीको निवासको लागि ढोका काठ: संस्करणहरु
"LADA Kalina क्रस": मालिकको समीक्षा। कार LADA Kalina क्रस: मूल्य
राम्रो तरिकाले एक हल्ला आकर्षित गर्न को लागी?
रितिक शैलीमा मूल पर्दा
यो सपना मा एक मानिस अँगालेको के अर्थ राख्छ? सपना पुस्तक व्याख्या हुनेछ
कथा कसरी लेख्न
Homocysteine - यो सामान के हो?
मदत गर्न र भन्दा काले रीतिथितिहरू कसरी नतिजा जोगिन गर्न?